Betafo: tratra ny mpanamboatra basy vita gasy | NewsMada
Betafo: tratra ny mpanamboatra basy vita gasy
Saron’ny zandary, tao Ambohimanambola distrika Betafo, ny alahady lasa teo, ny basy vita gasy roa, niampy fitaovana maro be fanamboarana basy. Tafiditra ao anatin’ny antsoina hoe “Mandio 2018”, hetsika fanadiovana ataon’ny zandary, izao ka nahazoana ity vokatra ity, araka ny nambaran’ny lefitry ny kaomandin’ny vondron-tobim-pileovana any Vakinankaratra, nandritra ny resaka nataony tamin’ny mpanao gazety.
Somary nanahirana ihany ny nanatanterahana ny fisavana sy ny fisamborana noho ny fisian’ireo “zazamena”, manao ny asan’ny mpitandro filaminana any an-toerana, satria nosakanan’izy ireo tsy hanao ny asany ny zandary. Nisy anefa ny fifampiresahana sy ny fandaminana niaraka tamin’ny lehiben’ny fokontany ka afaka nanohy ny asany ihany ny mpitandro filaminana.
Tao Iarivokely fokontany Tsinjoarivo kaominina Ambohimanambola no nisehoan’ity tranga ity. Nambaran’ny teo anivon’ny zandary fa tsy ara-dalàna ny fisian’ireo “zazamena” sy “zazamainty” ireo ary misy amin’izy ireo mihitsy ny miray tendro amin’ny dahalo. Roa lahy no voasambotra hatreto. Sazy henjana ny miandry azy ireo mikasika ity fanamboarana sy fanaparitahana basy vita gasy ity.